Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Mandehandeha mamaky ny lova Seychelles
Tranombakoky ny tantaram-pirenena Seychelles
Ny Museum Museum of Seychelles National Museum of History dia nampita ny mpitsidika 250 taona lasa izay manome azy ireo tsiro ny lova Creole manan-karena amin'ireo nosy.
Ny National Museum of History dia traikefa nahafinaritra feno maritrano, zava-kanto ary galeria.
Mampiseho ny kolontsaina kreôla ny galeria, feno zavakanto matanjaka sy mavitrika - manomboka amin'ny mozika sy ny dihy, amin'ny mozika sy kanto ary sakafo matsiro.
Ny fahatsiarovana noforonina nandritra ny fizahana ny tranombakoka dia azo entina mody ho fahatsiarovana amin'ny endrika saribakoly fako nentim-paharazana, boky tantaram-poko, kitapo, zavaboary vita amin'ny hazo, sns.
Ny iray dia tsy nanala sarona ny hakanton'ireo Nosy Seychelles raha tsy efa nandinika ny fakan'ny nosy. Any afovoan'i Victoria, renivohitry ny toerana haleha, ary tsy lavitra ny Clock Tower malaza, ny National Museum of History dia manana galeriana maro izay mitantara ny tantara taloha tamin'ny alàlan'ny artifact sy sary tokana.
Ny National Museum of History dia natao ho fahatsiarovana ny lasa, tsy amin'ny alalàn'ny ao anatiny ihany fa koa amin'ny maritrano fananganana kolonialy izay maneho ny maritrano nentin-drazana an'ny Seychelles. Nanangana ny tranombakoka tamin'ny voalohany tamin'ny taona 1965 ny tranombakoka ary naorina tao amin'ny trano fonenan'ny Fitsarana Tampon'i Seychelles teo aloha, taorian'ny nifindrany tamin'ny biraon'ny ben'ny tanànan'i Victoria ao 1990.
Ny fitsenana anao eo am-baravaran'ny tranombakoka no inoana fa sarivongana kely indrindra an'ny Mpanjakavavy Victoria eto an-drenivohitra kely nantsoina taminy tao amin'ny Loharano Queen Jubilee Fountain izay naseho, nandritra ny androm-piainan'ny mpanjaka efa ela, tamin'ny 5 Janoary 1900 avy amin'i Lady Mary Jane Sweet-Escott, vadin'ny Administrator ary governora anglisy voalohany any Seychelles, Sir Ernest Bickham Sweet-Escott. Dingana vitsivitsy miala eo dia ny tratran'i Pierre Poivre, mpikarakara ny Isle de France sy Ile Bourbon tompon'andraikitra amin'ny fampidirana kanelina sy zava-manitra amin'ireo nosy amin'ny alàlan'ny fananganana ny Jardin du Roi, aingam-panahy ao ambadiky ny zaridaina ankehitriny mitovy anarana ao amin'ny Enfoncement, Anse Royale.
Nasaina naneho ny tantaran'i Seychelles sy ny fahazoana, ny fitehirizana ary ny fampirantiana ireo zavakanto ara-tantara mahaliana ny foko izay maneho ny fomba amam-panao sy ny fomba fiainana taloha ny tantaran'ny Seychelles ao anatin'izany ny toekarena, politika, hetsika lehibe ary kolontsaina.
Ny fon'ny trano Seychellois
Malaza noho ny nahandro mahafinaritra azy ireo, ny olona Seychellois dia nanana fitaovana manokana izay nanampy azy ireo tamin'ny famoahana zava-manitra sy fangaro vaovao. Tamin'ny androny, ny lakozia dia rafitra misaraka amin'ny trano lehibe, namboarina mba hisorohana ny doro trano. Ny fitaovan'ny lakozia Creole mahazatra toy ny rihitra sy pestle, ny mugs ary ny lovia vita amin'ny enamel, ny parasy mangahazo ary ny 'marmit', vilany fandrahoana vy namboarina hita isaky ny trano, dia azo aseho. Ampahany manan-danja amin'ny ankohonana Creole, ny fampisehoana an-dakozia ao amin'ny tranombakoka dia mitana artifact izay mbola ampiasaina amin'ny lakozia maoderina manodidina an'i Seychelles.
Ny rindrin'ny mpanjono eo an-toerana sy ny pirogues hazo nentim-paharazana, sambo kely fanjonoana, dia mitondra anao any amin'ireo andro izay hanjonoan'ny mpanjono ny maraina vao mangataka trondro vaovao. Raha tsara vintana ianao, ary aloha loatra, dia azonao atao ny mijery ity fomba nentim-paharazana ity rehefa mandehandeha maraina eny amoron-dranomasina toa an'i Beau Vallon ianao. Aseho, azonao atao ny mahita fandrika trondro vita tanana vita amin'ny tanana fantatra amin'ny hoe kazye ary koa lansiv, akorandriaka, izay nampiasain'ny mpanjono hitaona ny Seychellois hivoaka ny tranony hankany amoron-tsiraka na hividianana ireo trondro vao maraina, fombafomba iray mbola velona mandraka androany.
Ny fitsaboana ny natiora dia ampahany amin'ny lova velona an'ny Seychellois. Amin'ny maha firenena nosy kely azy, dia nanararaotra izay azony natao ny tanana ary nahitana fanafody. Nahazo fitahiana amin'ny zavamananaina manan-karena, fanafody raokandro izay hitanao aseho, no nampiasaina hitsaboana aretina isan-karazany. Manomboka amin'ny tsaramaso ho an'ny malaises sy fanaintainana, balsama fanamainana ho an'ny may, na tonika na 'rafresisan' voaomana avy amin'ny ravina sy ny fakan'ny zavamaniry, dia maro amin'ireo fanafody ireo no mbola ampiasaina ankehitriny ary voaporofo ara-tsiantifika fa mahasoa ny fahasalaman'ny tena. Afaka mahita ny sasany amin'ireo zavamaniry ireo aza ianao rehefa mizaha ny làlan'ny natiora maro amin'ireo nosy.
Ny kolontsaina kreôla dia tototry ny kanto mavitrika sy mavitrika - manomboka amin'ny mozika sy ny dihy ka hatramin'ny ny famoronana sy ny asa tanana. Ny fiantombohan'ny zavakanto an'ny Seychellois dia aseho amin'ny alàlan'ny artifact toy ny sary sokitra sy zavamaneno nentim-paharazana ao anatin'izany ny amponga moutia sy ireo zavamaneno hafa vita ao amin'ny Seychelles. Afaka mahita sary sy asa tanana hafa ihany koa ianao, izay maro, toy ny kitapo rafia sy satroka, no lasa fahatsiarovana malaza.
Miaina toy ny Seychellois
Ny lamaody Seychellois nentim-paharazana ho an'ny tranga isan-karazany sy ny taovolo mahazatra fanaon'ny vehivavy tamin'izany fotoana izany dia azo aseho amin'ny iray amin'ireo galeran'ny tranombakoka. Azonao atao mihitsy aza ny mahita ny sasany amin'ireo lalao nentim-paharazana, ny sasany izay efa nampitaina ary mbola velona eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Rehefa mandinika ny sasany amin'ireo zava-kanto ireo ianao dia ho hitanao ny fomba namolavolana ny fisian'ny Afrikana, Aziatika ary Eoropeana ny kolontsaina kreôla.
Cherishing Seychelles tantara
Tsy misy fomba tsara kokoa hahatsiarovanao ny dianao namaky ny efitranon'ny tantara toy izay ny nitondra fahatsiarovana kely ho any an-trano. Aorian'ny fitsidihanao ny fivarotana fanomezana ao amin'ny tranombakoka izay mitazona fanomezana isan-karazany ho an'ny olona amin'ny taona rehetra. Misafidiana saribakoly tranainy na boky momba ny tantaram-pirazanana ho an'ny tanora ho an'ny ankizy mandritra ny fotoana hatoriana rehefa mizotra mankany amin'ny tany nofinofy izy ireo. Afaka mahita asa tanana eo an-toerana ianao manomboka amin'ny kitapo ka hatrany amin'ny zavaboary vita amin'ny hazo ary azonao atao aza ny mitondra mody kely! Azo antoka fa hahita zavatra ho anao sy ny olon-tianao rehetra ianao!